Degso World Truck Driving Simulator APK loogu talagalay Android
Degso World Truck Driving Simulator
Bilaash Degso loogu talagalay Android (28.00 MB)
Degso World Truck Driving Simulator,
Ku bood gawaarida leh awood iyo xirmooyin kala duwan, oo ay ku jiraan moodooyinka Brazil, Yurub iyo Ameerika, oo ku habeyn sawirka aad ugu jeceshahay gawaarida xamuulka, isjiidka iyo darawalada. Hakinta qolka, dhaq -dhaqaaqyada tuulooyinka, dhaqdhaqaaqyada anteenooyinku way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo nooca dhulka.
Ka dhig booskaaga qolka darawalka ee ciyaarta, kaas oo leh astaamo gaadiid sida dareenka isteerinka iyo hagaajinta noocyada kontaroolada kala duwan, qiiqa dhabta ah ee qiiqa iyo gudbinta otomaatiga ah iyo gacanta. Iyada oo la matalayo shaqooyinka ugu waaweyn ee xamuulka, waxaad ku qeexi kartaa sifo kasta oo aad rabto. (laba nooc oo quful kala duwan, bareega mishiinka, autopilot, fallaadh, digniin, nadiifiye, iftiin sare, iftiin hoose)
Ka gudub khataraha sawirrada dhabta ah ee leh ikhtiyaarrada qaabeynta si aad uga shaqeyso taleefannada daciifka ah oo aad isu caddeysid inaad tahay darawal wanaagsan oo miinshaaro, waddooyin wasakh ah iyo caqabado badan oo kale. Ka hel khariidada weyn ee adduunka furan oo leh magaalooyin kala duwan.
World Truck Driving Simulator Noocyada
Cabirka Faylka: 28.00 MB
Horumar: Dynamic Games